Gabar abwaanad ah oo Imaaraati ah oo tillaabo bahdil ah lagula kacay kaddib markii ay ka hor timid heshiiska Israel | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Gabar abwaanad ah oo Imaaraati ah oo tillaabo bahdil ah lagula kacay...
(Dubai) 28 Sebt 2020 – Gabyaa Imaaraati ah ayaa shalay loo diidey inuu ka safro dalkiisa kaddib markii ay si cad uga hor timid heshiiska Imaaraadka iyo Israel, sida ay qortay wakaaladda Anadolu Agency.
Dhabiya Khamis ayaa sheegtay in garoonka dayuuradaha ee Dubai laga celiyey xilli ay dayuurad u raaci lahayd magaalada Qaahira ee dalka Masar.
“Waxaa sidaa loo yeelay aragtida lidka ah ee aan ka dhiibtey Sahyuuniyadda iyo xiriirka Israel,” ayay ku tiri baraha bulshada.
“Waxaan u cabsanayaa noloshayda iyo xornimadayda iyadoo la iigu gooddinayo in la i xiri doono,” ayuu yiri, iyadoo ay qorayaal iyo abwaanno hiillo u muujiyeen Khamiis.
Gabadhan abwaanadda ah ayaa Imaaraadka ka caraysiisey kaddib markii ay heshiiska Israel ee 15-kii Agoosto ay ku tilmaantay maalin musiibo iyo murugo xambaarsan.
Previous articleDAAWO: Al Jazeera oo barnaamij qurux badan ka sameeysay magaalada Muqdisho oo aad u dhismaysa (Meelaha ay ka dhiman tahay?)
Next article“Halkan ayuu wax ku baran doonaa” – Wasiir Dibadeedka Turkiga oo la kulmay Guuleed Yare + Sawirro